RASMI: Kulamada ka harsan Premier League oo isbadel lagu sameeyay….(Maxay tahay Sababta??) – Gool FM
(England) 20 Abriil 2019. Premier League ayaa shaaciyay in isbadel lagu sameeyay dhowr kulan oo la ciyaari lahaa usbuucyada soo socda kaddib markii afar koox oo ka dhisan Ingiriiska ay u soo baxeen semi final ka tartamada Yurub.
Liverpool iyo Tottenham ayaa gaaray afar dhamamadka Champions League halka Chelsea iyo Arsenal ay iska xaadiriyeen semi final ka Europe League, sidaa darteed Premier League ayaa isbadel ku sameeyay kulamada soo aadan si uu ugu daneeyo afartaan kooxood.
Kulanka Leicester City iyo Arsenal ayaa la ciyaari doonaa 12:00 Axad 29-ka Abriil, Gunners ayaa la siiyay afar maalmood oo nasiino ah ka hor kulanka ay ku wajaheyso Valencia, Khamiis 2-da bisha May.
Premier League ayaa sidoo kale caawiyay Tottenham iyo Liverpool iyagoo kulamada ay la kala ciyaarayaan Bournemouth iyo Newcastle u raray Sabti 4-ta bisya May.
Waxay taa la micno tahay in Spurs ay heysato saddex maalmood oo nasiino ah halka Liverpool la siiyay afar maalmood ka hor kulamadooda Ajax iyo Barcelona.
Inkastoo la shaaciyay maalmaha loo raray kulamadooda balse weli lama sheegin waqtiga la baasanayo kulanka calaashaan saacada.
5-ta May Axad, Chelsea ayaa marti qaadi doonta Watford marka ay saacada England tilmaameyso 2pm, Arsenal ayaa iyana la ciyaari doonta Brighton 4.30pm, labada koox ee ka dhisan London ayaa kulamadooda Europe League ciyaari doona afar maalmood oo nasiino ah kaddib Khamiis 9-ka bisha May.
Hoos ka Aqriso kulamada Waqtigooda la badelay:
Leicester City vs Arsenal (Sky Sports) – 12:00
Bournemouth vs Tottenham Hotspur (Sky Sports) – TBC
Newcastle United vs Liverpool (Sky Sports) – TBC
Chelsea v Watford – 14:00
Arsenal v Brighton – 16:30
Manchester City v Leicester City (Sky Sports) – 20:00
"Sida kaliya oo aad Messi ku celin kartaan waa...". - Mourinho oo dar-daarankaan siiyay Liverpool